आलिया भट्ट अहिले रणबीर कपुरको साथमा फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’को शूटिङमा व्यस्त छिन् । यो फिल्म पछि रणवीर सिंह संग जोया अख्तरको फिल्म ‘गल्ली बाँया’ को शूटिङमा व्यस्त हुन्छिन् । हालै एमएएमआई फेस्टिवल २०१७ मा...
ऐश्वर्याको ‘रेट’ सुनेर सबै चकित
केही वर्षको विश्रामपछि बलिउडमा फर्किएकी ऐश्वर्या राय कम तर राम्रो फिल्ममा केन्द्रित हुन खोजिरहेकी छिन् । विवाह गरेपछि छोरी जन्माएर घरमै बसेकी ऐश्वर्या बलिउडमा फर्किएसँगै ‘फन्ने खाँ’मा सक्रिय भइन् । उन...
३ सय करोडको क्लवमा समावेश सलमानको ‘टाइगर जिन्दा है’ ले बनायो नयाँ रेकर्ड
एजेन्सि । फिल्म ‘टाइगर जिन्दा है’ ३ सय करोडको क्लवमा समावेश भएको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले ट्वीट गरेका छन् । उन ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘१६ औं मा फिल्म टाइगर जिन्दा है ले ३ सय करोडको आंकडा भेट्टाए...
महोत्सवमा भ्याई नभ्याई भएका राजेश पायलको यस्तो छ अवको कार्यक्रम तालिका
इटहरी । नयाँ वर्ष २०१८को अवसरमा गायक राजेशपायल राईले इटहरीमा आफ्नो प्रस्तुती देखाइसकेका छन् । हजारौ दर्शकहरुलाइ आफ्ना चर्चित गितले भरपुर संगितमा झुमाए । नयाँ वर्षको अवसरमा राई पूर्वी क्षेत्रका विभिन्...
राखीलाई मानहानीको आरोप: हनीप्रीतकी आमाले गरिन् पाँच करोडको दावी
देशद्रोह गरेको आरोप खेप्दै कारागारमा रहेकी हनीप्रीतकी आमाले राखी सावंतलाई आफ्नी छोरीको छवी खराव गरेको आरोप लगाएकी छिन् । मानहानीको आरोपमा हनीप्रीतकी आमा आशाले राखी विरुद्ध ५ करोड रुपैंयाको नोटिस पठाएक...
काठमाडौं । शेरबहादुर शन्की मान्छेको कथामा निर्माण भएको फिल्म हो । अवकाश प्राप्त एक आर्मी को कथामा यो फिल्म रुमलिएको छ । निडर, शन्की र बलियो पात्र शेर बहादुर फिल्मको मूख्य पात्र हो । शेर बहादुर आफ्नो ल...
यो हप्ता करीना कपूर खानको बिकिनी लगाएको फोटोले इन्टरनेटमा चर्चा पाएको छ । वोग म्यागेजिनका लागि लिगिएको बिकिनी फोटोमा करिनालाई निकै ग्लामरस देखिएको छ । वास्तवमा करीना आफ्नो बिकिनी फोटोमा धेरै नै फिट द...
शिवको गीतमा सरोज र सिर्जनाको रोमान्स, यस्तो छ ‘प्रियसी आई लभ यु’ (भिडियो सहित )
काठमाडौं । शिव राजा र बिष्णु बुढथोकीको आवाजमा रहेको गज्जबको गीत ‘प्रियसी आई लभ यु’ सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिबार सार्वजनिक गरिएको गीतमा प्रेम र प्रेमिल जोडीहरुको भावलाई देखाइएको छ । शिवराजाकै शब्दरचना...
माहिरा र रणवीरको ब्रेकअप
शाहरुख खानको फिल्म रईसमा काम गरेकी पाकिस्तानी नायिका माहिरा खान फेरी एक चोटी चर्चामा आएकी छिन् । यो बेला भने रणवीर कपुरसंगको सम्वन्ध भन्दा पनि रणवीर संगको ब्रेकअपका बारेमा समाचार बाहिर आएको छ । हालै ...
यी थिए २०१७ मा विश्व रेकर्ड राख्न सफल सिनेमा
मुम्बई । सन् २०१७ मा विश्वभर निर्माण भएका सिनेमामध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने दस सिनेमाहरू यस प्रकार रहेका छन् । यी चलचित्रले पैसा मात्रै धेरै कमाएनन् चर्चा पनि उत्तिकै पाए । ब्युटी एन्ड द बिस्...
१२ बर्षिय गायक निप्पोनको अचम्मका केटि फ्यानहरु
काठमाडौं । अस्ट्रियामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली १२ बर्षिय गायक निप्पोन लामाले आफ्नो जीवनको पहिलो नेपाली गीत सार्वजनिक गरेका छन्। अंग्रेजी नयाँ बर्षको उपलक्षमा जनावरी १ मा सार्वजनिक गरिएको गीत ‘हे गर्...
नेता बनिन् केकी, यस्तो छ ट्रेलर
केकी अधिकारी अभिनित सामाजिक चलचित्र गाउँकी छोरी को ट्रेलर रिलिज भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा केकी गाउँपालिका अध्यक्ष बनेकी छिन् । स्थानिय सरकारले गाउँमा ल्याउन सक्ने परिर्वतनलाई चलचित्रमा देखाइएको छ । ...
समिर बिष्णु खत्रीले ल्याए ” नाता टुट्यो नङ र मासुको” (भिडियो सहित)
संगीत क्षेत्रमा निरन्तर लागी परेका युबा सर्जक तथा मोडल मोहन के सी ले अभिनय गरेको गीत बजारमा आएको छ । रंगीन मिडियाले बजार ब्यबस्थापन गरेको गीतमा युबा सर्जक तथा गाएक समिर बिष्णु खत्रीको लय तथा गोबिन्द ब...
काठमाडौं । चलचित्र ‘झमक बहादुर’को रिमिक्सि गीत ‘आमैले भन्थे धाराको पानी’ सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य उत्तम केसीको आतिथ्यमा गीत सार्वजनिक गरिएको हो...
भाउ खोज्ने प्रेमिका बाट दिक्क भएपछि गायक उद्धब घिमिरेले के गरे यस्तो (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । दोलखा जिल्लामा जन्मिएका सबैको सांगीतिक ढुकढुकी उद्धब घिमिरेले एकोहोरो रुपमा सिन्धुपाल्चोक कि निरु कार्कीलाई माया गरिरहँदा निरुले वास्ता नगरी भाउ खोजे पछी, गायक उद्धब दिक्क भएर अबको दिनमा आफ...
बलिउड महानायक अमिताभलाई ठुलो झट्काः कसरी डुब्यो ६ सय ४० करोड ?
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलाई एक झट्का लागेको छ । बिग बीलाई करोडौको घाटा लागेको छ । उनलाई करिब ६ सय ४० करोडको घाटा भएको छ । हालै बिटक्वाइन आएर तीव्ररुपमा बिग बीले ६ सय ४० करोड कमाएका थिए । तर भर्चु...
प्रदीपको प्रेममा सपना आएपछि (भिडियो सहित)
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका गायक प्रदीप रानाभाटको शब्द, संगीत तथा स्वरको ‘प्रेममा परेछु’ शीर्षकको रोमान्टिक गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अष्ट्रेलियामा निर्माण भएको उक्त गीतको ...
‘कृ’ को ट्रेलर पछि अव क्लब गीत सार्वजनिक गर्दै निर्माण टोली, कस्तो होला ‘यति यति पानी गंगै रानी’
काठमाडौं । अभिनेता अनमोल केसीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘कृ’को ट्रेलर २ साता अगाडि रिलिज भयो । यो फिल्मको ट्रेलरलाई दर्शकले मन पराएका छन् । लामो समय नेपालको नम्बर १ ट्रेन्डिङमा बसेको फिल्मको ट्रेलरमा...
गायक कमलको गीत ‘लभ पर्ला जस्तो छ’ सार्वजनिक
काठमाडौँ, गायक कमल किरणको नयाँ गीत ‘लभ पर्ला जस्तो छ’ सार्वजनिक भएको छ । डढेलो सर्यो किन, कोहि भन्छन अमेरिका, तल्ला घरे सान्ननीको जस्ता गीतबाट चिनिएका किरण विगत एक दशकदेखि निरन्तर नेपाली गीत संगीतमा आ...
किन फुस्कियो त हिमाल सागरको कट्टु ?? (भिडियो सहित)
नेपाली सांगेतिक क्षेत्रमा आधुनिक र पप गितका एक सुपरिचित गायकको नाम लिदा हिमाल सागरलाई छुटाउ सकिन्न। २०३७ साल कार्तिक ८ गते झापाको बनयानिमा जन्मिएका हिमाल सागरले २० बर्षको उमेरबाट सांगीतिक यात्रा सुरु ...